Apple inoshanda pane akangwara mabhandi eApple Watch | Ndinobva mac
Apple inoshanda pamahungwaru akachenjera eApple Watch
Nekutanga kwe nyowani Apple Watch uye zvese zvinoshandaVamwe vangatofunga kuti wachi yekambani yeAmerica inogona kupa zvakanyanya kupfuura zvazviri kuita parizvino. Naizvozvo hazvishamise idzi nhau nezve Apple patent, mune izvo zvishongo zvinokwanisa kupa rumwe ruzivo kune mushandisi.
Zvichida kana Apple ikafunga kuisa mamwe mashandiro kuApple Watch, tinenge takatarisana newachi ine hukuru hwakakura uye huremu.
Apple Watch zvishongo zvinogona kuve kiyi kune ramangwana reWareable
Nehukuru hweApple Watch, zvakaoma kurongedza zvimwe zvinhu mairi kupfuura zvazvinoita. Parizvino chishandiso chakanakisa maererano nenyaya dzehutano, semuenzaniso. Zvese izvi zvinoitwa muhukuru hwakadzikama uye huremu. Kana isu taida kuwedzera mabasa, isu taizofanira kusiya mamwe ehunhu. Unogona kutotadza kurasikirwa neicho chinonzi wachi.
Naizvozvo, Apple yafunga mukana wekusanganisa mamwe mabasa kuburikidza nemawatch band. Dambudziko rakakura raizogara muchirongwa chekusimudzira kuApple Watch. Mukutaura, zvinoita sekunge zvaizofanana neiyo ine vashandisi kusvika parizvino. Ehe, takatarisana nekusagadzikana kwekuti izvi zvinobatanidza, zvaizotamisa ruzivo kuwachi uye zvinofanirwa kumira nemamiriro ekunze kana ziya.
Imwe mukana ndeyekuti bhatani raizobvumidza mushandisi kudzora akateedzana pini dzinogona kudzorerwa kucheka kubatana uye kuburitsa rundarira panguva imwe chete.. Kunyangwe zvave zvakare zvataurwa kuti zvinogona kutora fomu ye slide switch, iyo yaigona kuita kuti mashandiro adzokere shure.
Nemazano aya, Apple inogona kusanganisira maviri marudzi ekubatanidza. Dzimwe ndidzo dzaizounza mashandiro matsva kuwatch, nepo mamwe mabhatani ari iwo angave anobatanidza bracelet newachi.
Tichaona kuti zano iri rinochinja sei, nekuti parizvino ndizvo zvazviri, patent iyo haifanire kuve yechokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inoshanda pamahungwaru akachenjera eApple Watch
Serato Pro uye Lite yeva DJs ikozvino inotsigira macOS Catalina
Luna Ratidza zvakare inoshandura Mac yedu kuita yechipiri skrini